Muvhuro, July 11, 2016 Mugovera, January 14, 2017 George Corugedo
Data Management Platforms (DMPs) yakauya pachiitiko makore mashoma apfuura uye vanoonekwa nevazhinji semuponesi wekushambadzira. Pano, ivo vanoti, isu tinogona kuve ne "rekodhi yegoridhe" yevatengi vedu. MuDMP, vatengesi vanovimbisa kuti iwe unogona kuunganidza ruzivo rwese rwaunoda rwema 360-degree maonero emutengi. Dambudziko chete - hachisi chokwadi. Gartner anotsanangura DMP seSoftware inonyudza data kubva kunzvimbo zhinji
Chimiro chechinyakare chemunhu anobudirira mutengesi mumwe munhu anosimuka (pamwe aine fedora nebhegi), akashonga charisma, kunyengetedza, uye kutenda mune zvavari kutengesa. Nepo kushamisika uye runako zvichitamba zvine basa mukutengesa nhasi, analytics yakabuda seyakakosha chishandiso mubhokisi revatengesi. Dhata iri panhongonya yazvino maitiro ekutengesa. Kugara uchiita zvakanyanya kubva kudhata zvinoreva kuburitsa njere dzakakodzera
Chii chinonzi iyo Internet yezvinhu? Zvinorevei Kushambadzira?
Chipiri, Kurume 3, 2015 Chishanu, Mbudzi 17, 2017 Douglas Karr
Kubatana kweInternet kuri kuve kwechokwadi kune chero chishandiso. Izvi zvichatamba basa rakakura mune hombe dhata uye kushambadzira mune redu ramangwana riri pedyo. Gartner akafanotaura kuti kusvika 2020 kuchave neanopfuura mamirioni makumi maviri nematanhatu emidziyo yakabatana neInternet. ] = [op26-0y9q6 Ndeipi iyo Internet yezvinhu Zvinhu inoreva izvo zvinhu zvatisingafungidzire kuti zvakabatana. Zvinhu zvinogona kuve dzimba, zvishandiso, zvishandiso, mota, kana kunyangwe vanhu. Vanhu vachadaro
Zvinonakidza kuverenga kufembera kwaGartner kwemhando yepamusoro gumi neshanu dzegore ra10… uye mashandiro anoita zvese kushambadzira kwedigital. Kunyangwe kufambira mberi mukuchengetedza uye Hardware kuri kukanganisa kugona kwemakambani kudyidzana kana kugovana ruzivo nevatengi uye tarisiro nekukurumidza uye zvakanyanya. Top Gumi Technologies ye2011 Cloud Computing - Cloud komputa masevhisi aripo pamwe neakawanda kubva kune yakavhurika veruzhinji kusvika kuvhara zvakavanzika. Makore matatu anotevera achaona kuendeswa